ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး စတုတ္ထနေ့ (၁၆. ၁၁. ၂၁၀၈) | Pyithu Hluttaw
(က)-ဆေးတက္ကသိုလ်(၂)၏ သင်ကြားရေးဆေးရုံကြီးဖြစ်သည့် သင်္ဃန်းကျွန်းစံပြဆေးရုံကြီးကို ခုတင်(၈၀၀)ဆံ့ သို့မဟုတ် ခုတင်(၁၀၀၀)ဆံ့ ဆေးရုံကြီးအဖြစ်သို့ အဆင့်မြှင့်တင်ပေးရန်အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(ခ)-ရွာငံမြို့နယ်၊ မြင်းကျဒိုးတိုက်နယ်ဆေးရုံ ဖွင်‌့လှစ်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင်‌့ စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(ဂ)-မိုင်းပန်မြို့၊ မြို့နယ်အားကစားကွင်းအား အဆင်‌့မီအားကစားကွင်းဖြစ်စေရန် ပွဲကြည့်စင်(Grand Stand)၊ Scored Board၊ ကွင်းပတ်လည်ပြေးခုန်ပစ်ကစားကွင်းများနှင်‌့ အားကစားရုံအား ယခုဘဏ္ဍာ ရေးနှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင်‌့ စပ်လျဉ်းသည်‌့မေးခွန်း
(ဃ)-မင်းတုန်းမြို့နယ် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် လစ်လပ်နေသော လက်ထောက်ဆရာဝန်တစ်ဦး ခန့်ထားပေး ရန်နှင့် ဘွဲ့လွန်တက်နေသောဆရာဝန်များအစား မည်သို့ဆောင်ရွက်ပေးမည်ကို သိလိုခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(င)-ကျောင်းကျန်းမာရေးကဏ္ဍ ပိုမိုထိရောက်စေရန်နှင့် ကျောင်းကျန်းမာရေးကဏ္ဍမှ နိုင်ငံတော်၏ Health Information တစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြုရန် ကျောင်းသားတိုင်းအတွက် ကျန်းမာရေးမှတ်တမ်း (Health Record)ထားရှိပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(စ)-ရန်ကုန်မြို့၊ ရွာသာကြီးပရဆေးဥယျာဉ်တွင် တိုင်းရင်းဆေးသိပ္ပံနှင့် ခုတင် ၁၀၀ ဆံ့ တိုင်းရင်းဆေးရုံ တည်ဆောက်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(ဆ)-ဆိပ်ဖြူမြို့နယ်တွင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အပြည့်အဝပေးနိုင်ရန်အတွက် ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ (၅) ခု ဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်ခြင်း ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး စတုတ္ထနေ့ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်